အလွဲကြီး လွဲနေတဲ့ Q ပေါ်လစီနဲ့ မြန်မာ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေး - Zet Star
အလွဲကြီး လွဲနေတဲ့ Q ပေါ်လစီနဲ့ မြန်မာ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေး
စနစ်က တလွဲဖြစ်နေတာ သိမှာမဟုတ်လို့ပြောပြတာ ပြင်သင့်နေတာ ကြာနေပြီ အခုတော့ အခြေခံလူတန်းစားက ခံဖက်ချည်းဖြစ်နေပြီ
လူနာက နိုင်ငံခြားသွားရမှာမို့ နှာခေါင်းတို့ဖတ်ယူရတယ် လူကအကောင်းကြီး ပေါ့စတစ်ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာ နှာခေါင်းတို့ဖတ် ယူတာက ၃၀ ရက် အဖြေထွက်တာက ၁ ရက်နေ့ ည သူ့ကိုလာခေါ်တော့ ၃ ရက်နေ့နေ့လည်မှ လာခေါ်ဖို့တောင် တော်တော် ပြောယူရတယ်တဲ့ အဲ့တာနဲ့ သူလည်း positive centre ရောက်လာရောပေါ့ ပြသနာကအဲ့တာမဟုတ်ဘူး သူ့အိမ်က မိသားစုငါးယောက်ကို သူ့အဖြေရရချင်း သက်ဆိုင်ရာက လာမခေါ်ဘူး ဒါပေမယ့် ရပ်ကွက်က အရမ်းကောင်းတယ် အိမ်မှာ Home Quarantine လုပ်ပေးထားတယ် ထောက်ပံ့တယ်
သူ့မိသားစုက ၇ ရက်တိတိ အိမ်မှာပဲ အားလုံးလည်း အကောင်း အိုကေ သူကိုယ်တိုင်လည်း နောက်လေးရက်ပြည့်ရင် Positive centre ကနေ အိမ်မှာ Home Q ဆက်ဖြစ်တော့မှာ အားလူံးက အဆင်ပြေနေတော့မှ ​စောစောစီးစီးလာမခေါ်ခဲ့ပဲ အခုမှ အိမ်က မိသားစု ငါးယောက်ကို Facility Quarantine ဆိုပြီး လာခေါ်သတဲ့ စဉ်းစားကြည့်နော် ဘယ်လောက် စိတ်ပျက်စရာကောင်းလဲ ဒါတင်မကသေးဘူး တို့ဖတ်က နောက်ငါးရက်မှ ယူမှာတဲ့ အဲ့တာဆို နောက်ငါးရက်နေမှ လာခေါ်လေ အဲ့မိသားစုဝင်ငါးယောက်က သူ့ဘာသာသူ အိမ်မှာ အဆင်ပြေနေတဲ့ ကိစ္စကို ဘာအတွက်ကြောင့် Facility ကို ခေါ်နေရတော့သလဲ
ပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်ရဦးမယ် တစ်ခြားသူတွေနဲ့ရောနှောပြီး ကူးစက်နိုင်ခြေက များနေသေးတယ် နောက်လေးရက်နေရင်တောင် Positive ဖြစ်ခဲ့သူက ပြန်လာပြီ Home Q ၇ရက် ဆက်နေရင် ပြီးပြီ အရှေ့မှာ Home Q နေလာတဲ့ရက်တွေ ထည့်တွက်ပါလို့ပြောတော့ အထက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလို့ပြောတယ် စည်းကမ်းအတိုင်းလို့ပြောတယ်တဲ့ ဟုတ်ပြီ စည်းကမ်းအတိုင်း ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆို အစောကတည်းက လာခေါ် စောစောစစ် တစ်ခါတည်း ဖြတ် ပို့စရာရှိတာပို့ မခေါ်နိုင်ဘူးလား ရတယ် အိမ်မှာ ပိတ်လှေင်နေခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေကိုပါ ပြန်ပြီးထည့်တွက်ပေးလေ အဲ့လိုမျိုးတာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးရမယ့်ဟာမျိုးကျတော့လည်း တာဝန်မခံနိုင်တာလား
အေး ဟုတ်ပြီ နောက်ထပ်ငါးရက်သည်းခံပြီးနေပြီးလို့ မိသားစုဝင်တွေထဲက ပေါ့စတစ်ထွက်လာရင်ကော နောက်ဆယ့်တစ်ရက်ထပ်နေနေရမှာလား အဲ့တာဆို စုစုပေါင်း ၂၂ ရက်ဖြစ်သွားပြီး သင်္ချာတတ်လား ဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ ပိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လနဲ့ချီပြီး ရှိနေဦးမှာ အဲ့ဒီတော့ သူများကို မကူးနိုင်သည့်တိုင် စစ်ရင်ပေါ်မှာ သူ့ထက်ရှင်းနေတာ သူ့လောက်မရှင်းဘူးနော်
ခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ကိုယ်ချင်းစာဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်မှ စာနာတတ်တာလား အဓိကက စနစ်က တလွဲ Fail ဖြစ်နေပြီး လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားတွေးခေါ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမယ့်သူတွေက အဆင့်တိုင်းမှာ ရှိမနေဘူး စောက်တလွဲဖြစ်နေပြီး ကြပ်ညပ်သတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သည် Q policy ကြီးကိုလည်း ပြင်သင့်တဲ့နေရာ အခုထိ မပြင်နိုင်သေးဘူး။
အကောင်းကြီးရှိနေတာ Home Q ပဲ ထားလိုက်တော့ပေါ့ Positive ဆိုရင်တောင် ကောင်းနေရင် အိမ်မှာနေလို့ရရင် ထားလိုက်တော့ပေါ့ ရပ်ကွက်ကစောင့်ကြည့် အပြင်ခိုးထွက်ရင် ထောင်ခြောက်လတစ်နှစ်ချပလိုက် အသိမရှိဘူး အကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် စည်းကမ်းမလိုက်နာဘူး လုပ်ချင်တာလုပ်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူဆိုရင် သေပြီဆရာပဲ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူတွေကို အပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရမယ်။
အဲ့လူနာက မြောက်ဥက္ကလာက ဒါပေမယ့် ကျုပ်သေချာတယ် ကျန်တဲ့ မြို့နယ်တွေမှာလည်း သည်လိုအဖြစ်တွေ ဒုနဲ့ဒေး အလုပ်သင်ဆရာဝန်ညီမလေးတစ်ယောက်ဆိုလည်း မနက်ဖန်သန်ဘက်ခါဆို positive Q ရက်ပြည့်ပြီ အိမ်မှာ Home Q ရတော့မယ် သူ့အိမ်ကလူတွေက အခုထိ swab အဖြေမရသေးဘူး သူအိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပြီ သူလည်းသည်လိုအဖြစ်မျိုး ပြင်ရမယ့်နေရာ ပြင်သင့်နေပါပြီ။
ပေါ့စတစ် ခေတ္တ လှိုင်စင်တာ
အော်ပေးကြပါဗျာ လူတွေ သိသင့်ပါတယ် အပေါ်က လူကြီးဆိုတာတွေလည်း သိသင့်တယ် အောက်မှာ ဘယ်လောက်တောင် အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခါင်းသွေးထွက်နေသလဲ လွဲနေသလဲဆိုတာ အရေးထဲ အောက်မှာဘာဖြစ်နေသလဲတောင် မသိပဲ အဲကွန်းခန်းထဲကနေ ဖာနေဖားနေတဲ့ ပို့စ်တွေမြင်ရင် အော်ဂလီဆန်တယ်။
← ယခုရက်ပိုင်းတွင် ကိုဗစ်လူနာများ ပိုတွေ့လာမည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြား
ဘုရားမြွေဆိုတာ တကယ်ရှိသလား? ဘုရားပေါ်မှာ မြွေတွေ ထားသင့်သလား? →